Fiantraikany lehibe amin'ny Photoshop haingana sy mora | Famoronana an-tserasera
Fiantraikany lehibe amin'ny Photoshop haingana hahazoana a fikitika miavaka amin'ireo sarinay SAMBATRA mampihena ny kilema eo amin'ny hoditra noho ny habetsaky ny jiro misy ireo sary. Tao anatin'ny minitra vitsy monja misy fitaovana tsotra nefa be mpampiasa ao Photoshop hamorona an'ity izahay vokany mahaliana sary.
Mianara a hafetsena mahaliana be mpampiasa amin'ny sehatry ny lamaody amin'ny famerenana sary, ahatratra a hatsaran-tarehy madio ary fahalavorariana amin'ny hoditra ka hatramin'ny madio indrindra lamaody magazine magazine. Ity teknika ity dia azo ampiasaina amin'ny karazana sary rehetra ary afaka ampifanarahana amin'ny filantsika.
Conseguir hoditra tonga lafatra Mora dia mora tokoa raha misy jiro lehibe mamely ny hoditsika, manala ireo lesoka sy pentina ary ketrona rehetra ireo. Ny lakile avo lenta dia vokatra mahaliana izay tratra asongadino ireo jiro amin'ny sary, ka hahatratra estetika tena manintona amin'ny sehatra hita maso.
Afaka mahita ohatra iray amin'izany vokany izany isika eo amin'ny sary etsy ambony, raha mijery akaiky isika miavaka be ny jiro. Ity vokatra ity dia azo atao tanteraka Photoshop na amin'ny Photo studio amin'ny alàlan'ny fampiasana jiro.
1 Mamorona lakile avo lenta ao amin'ny Photoshop
1.1 Avadiho ho mainty sy fotsy ny sary
1.2 Fiovan'ny fanitsiana miolakolaka
Mamorona lakile ambony ao Photoshop
Ny zavatra voalohany hataontsika dia mitady sary Mba hampiharana ny vokany, raha vantany vao azontsika io dia hosokafantsika ny Photoshop ary hanomboka hiara-hiasa aminy izahay.
Ny dingana voalohany hahazoana ny lakilentsika avo indrindra dia avadiho ny sarinay loko ho sary mainty sy fotsy, hanaovana an'io dia hamorona a sosona mainty sy fotsy fanindriana ny bokotra ambany ao amin'ny fizarana sosona.
Parameter an'ny vokany mainty sy fotsy azontsika atao ny manitsy azy ireo arak'izay ilaintsika.
Fiovan'ny fanitsiana miolakolaka
Ny dingana manaraka sy farany dia ny famoronana a curves fanitsiana sosona Mba hanasongadinana ny jiro amin'ny sary, hanaovana izany dia tsindrio ny bokotra ny sosona fanitsiana miolakolaka ao anaty faritra sosona.
Raha vantany vao manana ny fanitsiana ny curves isika, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dias manova ny fiolahana hampamiratra ny jiro amin'ny sary. Ity ampahany ity dia miankina amin'ny vokatra tadiavintsika, ampiharina imbetsaka izy io malama endrika ary ny hafa, fa tsy endrika mihoa-pampana manala ampahany amin'ny silhouette amin'ny vatana.
Izahay dia manamboatra ny fiolahana mifanaraka amin'ny tiantsika ary ho vitantsika izany vokany mahaliana sary tena manintona amin'ny sehatra hita maso ary azo ampiasaina amin'ny karazany amin'ny sary rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Fiantraikany lehibe amin'ny Photoshop haingana
gregpoulsen dia hoy izy:
Bilaogy tena tsara. Misaotra betsaka ny mpanoratra.
Nanamafy tsipiriany maro aho ary manantena ny hampiasa izany amin'ny asako.
Mamaly amin'ny gregpoulsen
Ny fanaka ho an'ny ankizy dia nivadika kilalao famoronana